FreeOffice 7.1.5 inogadzirisa nezve makumi mashanu nemashanu mumbure dzino | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi nehafu mushure previous version, Iyo Gwaro Sisekelo ichangotanga LibreOffice 7.1.5 Nharaunda, tag iyo yavakatanga kuwedzera kutanga neiyo 7.1 dzakateedzana asi ini ndinofunga ndichaguma ndaibvisa kuti ndidzivise nyonganiso. Uye ndezvekuti kubva pane dzino zvakateedzana, TDF inopa Enterprise sarudzo ine yakagadziridzwa rutsigiro inomhanya yakanangana neayo yega, nepo yakajairwa iyo, iyo inogamuchira iyo Community chitaridzi, inotsigirwa nharaunda.
Mavara parutivi, Iyo Gwaro Nheyo yakamisikidza 55 bugs mune ino kuburitsa, 20% yavo yekuvandudza kuenderana neMicrosoft Office mafomati DOCX, XLSX, PPTX uye maDOC ekare. Uye ndezvekuti, kunyangwe isu tisingazvifarire, hofisi inozivikanwa kwazvo ichiri yeMicrosoft, uye kwese kufambira mberi kunogona kuitwa kusimudzira kuenderana hakuzombokwani.
LibreOffice 7.1.5 inovandudza kuenderana neMicrosoft Office zvakare
Kunyangwe ichi chiri chechishanu chekugadzirisa, izvo zvinoreva kuti mabhugi mazhinji akatogadziriswa, Iyo Gwaro Senzvimbo haisati ichipa LibreOffice 7.1.5 yezvikwata zvekugadzira. Ichaita saizvozvo mumasvondo matanhatu, painoburitsa LO 7.1.6, asi izvozvi inotaura izvozvo iyi ichiri sarudzo kune avo vedu vanoda nhau dzese; Ivo avo vanoda chimwe chinhu chakachengeteka uye vane mashoma glitches vane LibreOffice 7.0.6 inowanikwa.
Zvakare, chirongwa atora mukana kurangarira kuti vanopa izvo Shanduro yebhizinesi iyo isingangopa chete kutsigira zvirinani, asi zvakare inofanirwa kuve nekugona kuodha mashandiro pane zvinodiwa. Pasina kuyedza kana kuziva chero munhu anoshandisa iyi sarudzo, ini ndinogona kupindura zvishoma kana kusareva nezvazvo.
LibreOffice 7.1.5 inowanikwa kubva masikati ano, saka tinogona ikozvino kurodhaunira kubva ku website yepamutemo. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi DEB, RPM, uye mapakeji ebhinari. Mumaawa mashoma anotevera ichave ichiwanikwa paSnapcraft uye Flathub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » LibreOffice 7.1.5 inogadzirisa yakatenderedza 55 bugs, asi haisati iri vhezheni yakakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira